ဒေါ်နယ်ထရမ့် အလိုမရှိ။ နိုင်ငံတွင်း မွတ်စ်လင်မ်များ ၀င်ရောက်ခြင်းကို ငါတို့ မတားဆီး (ဟီလာရီကလင်တန်၏ သ၀ဏ်စကား) | Danya Wadi
»သတင်းများ»ဒေါ်နယ်ထရမ့် အလိုမရှိ။ နိုင်ငံတွင်း မွတ်စ်လင်မ်များ ၀င်ရောက်ခြင်းကို ငါတို့ မတားဆီး (ဟီလာရီကလင်တန်၏ သ၀ဏ်စကား)
ဒေါ်နယ်ထရမ့် အလိုမရှိ။ နိုင်ငံတွင်း မွတ်စ်လင်မ်များ ၀င်ရောက်ခြင်းကို ငါတို့ မတားဆီး (ဟီလာရီကလင်တန်၏ သ၀ဏ်စကား)
Posted by danyawadi on December 19, 2015 in သတင်းများ
ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅
– ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ တစ်ဖက်သတ်အစွဲနဲ့ သံသယလွန်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုတွေကို ကုန်ကူးခြင်းအားဖြင့် ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲကို မွတ်စ်လင်မ်တွေ ၀င်ရောက်ခြင်းမှ တားဆီးလိုတယ်လို့ သူက ပြောကြားလိုက်တယ်။ ဒါဟာ ရှက်ဖွယ်လိလိ အတွေးအမြင် ဖြစ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်လည်း ကြီးမားပါတယ်။ ကျွန်မတို့ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသလောက် တစ်ယူသန်ဂျိဟာဒ်သမားတွေကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့ ပြုလုပ်နေချိန်မှာ မစ္စတာထရမ့်ကတော့ ၀ါဒဖြန့်မှုအသစ်တစ်ရပ်နဲ့ သူတို့ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုနေပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေရဲ့လက်ထဲ အခွင့်အရေးပေးအပ်နေသလိုပါပဲ။
ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ နောက်ဆုံးမှတ်ချက်စကားတွေဟာ သဲထဲရေသွန် ဖြစ်သွားပြီလို့ ရီပတ်ဘလစ်ကန် အမတ်လောင်းအချို့က ဆိုနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ GOP ကိုယ်စား လှယ်လောင်း များစွာက မွတ်စ်လင်မ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး အစွန်းရောက်စကားတွေ ဆိုနေကြဆဲပါ။ သူတို့ရဲ့ပြောဆိုပုံက မစ္စတာထရမ့်ရဲ့စကားထက် ပိုပြီး သိုသိပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ အတွေး အမြင်များကတော့ သိပ်မကွာခြားလှပါဘူး။
မွတ်စ်လင်မ်ကို သမ္မတ မခန့်အပ်သင့်ဘူးလို့ ဘင်န်ကာဆင်က ပြောတယ်။ မာကို ရူဘီယိုက မွတ်စ်လင်မ်တွေကို နာဇီပါတီဝင်တွေနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီး၊ ဗလီတွေကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ပိတ်သိမ်းခြင်းအမိန့် ထုတ်စေချင်နေတယ်။ ဂျက်ဘုရ်ှနဲ့ တက်ခရုဇ်ကတော့ ခရစ်ယာန်များသာ ဖြေဆိုနိုင်မယ့် ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်များအတွက် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးချက်လုပ်ဖို့ ကြံဆနေပါတယ်။ ခရစ် ခရစ္စတင်းန်ကလည်း သုံးနှစ်အရွယ် ဆီးရီးယားမိဘမဲ့ကလေးငယ်တစ်ဦးတစ်လေမျှကိုပင်လျှင် မချန်ရစ်ထားသင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ဟာ “တစ်ယူသန် အစ္စလာမ်မစ် အကြမ်းဖက်ဝါဒ” ဆိုတဲ့ ခွဲခြားရေးအသုံးအနှုန်းကို တွင်တွင်သုံးနေကြတယ်။ စင်စစ်မှာတော့ ဘာအသံမှမထွက်သူတွေ ကို သူတို့က ဝေဖန်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ ကျွန်မတို့ဟာ ဘာသာရေးစစ်ပွဲကြီးတစ်ရပ် ဆင်နွှဲနေပါတယ်လို့ ဂျေဟာဒ်ဝါဒီများ စွပ်စွဲချင်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းထဲ အတိအကျတွန်းပို့နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မွတ်စ်လင်မ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုပြောကြားထားသလဲဆိုတာ ရီပတ်ဘလစ်ကန်နယ် ပယ်ထဲ နောက်ခြေတစ်လှမ်း ပြန်လှည့်ပြီး ကြည့်လိုက်ပါ။ သမ္မတနေရာ ၀င်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ တစ်ဦးစ နှစ်ဦးစမျှသာ မဟုတ်ဘူး၊ အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးလိုလိုက မစ္စတာထရမ့်ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုပုံစံ နဲ့ ပြဿားတစ်လမ်းသံတစ်လမ်းပါ။ သူဟာ အခြား တန်းမ၀င်သူများရဲ့ အတွေးကောက်ချက်တွေအပေါ် သံယောင်လိုက်ပြီး ပြောဆိုနေခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ မစ္စတာထရမ့်က “ကျွန်တော် ဘာပြောပြော သူတို့က အပီအပြင် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော့်ဖက်ကို သူတို့ ရောက်လာကြတယ်လေ” ဆိုပြီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွေဟာ ကျွန်မတို့အားလုံးကို စိုးရိမ်စေပါတယ်။ ဒီလို ၀ါဒဖြန့်ပြောဆိုချက်တွေက တစ်ယူသန်ဂျိဟာ့ဒ်သမားများကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာ ကျွန်မတို့ကို တွန့်ဆုတ်သွားစေပါတယ်။ အစ္စလာမ်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး စုပြုံသတ်ဖြတ်ရေးလုပ်နေတဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့မိစ္ဆာရန်သူတွေကို ကျွန်မတို့က နိုင်အောင်တိုက်ကြရမှာပါ။ ဒီဂျိဟာဒ်ဝါဒီတွေကို တစ်စမကျန်တဲ့အထိ အနိုင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပက တအုံတကျင်းသော မွတ်စ်လင်မ်အများစုဟာ ကျွန်မတို့ဖက်က ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာရှိတဲ့ ပြည်တွင်းမွတ်စ်လင်မ်တွေအပါအ၀င် တစ်ယူသန်ဝါဒ တားဆီးကာကွယ်ရေးမှာ ကူညီနေသူ အများအပြား ရှိနေကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရန်သူတွေပါလို့ ဘာကြောင့် တွေးထင်နေရပါသလဲ ? ဒီထင်မြင်ချက်က ကျွန်မတို့ကို ဘာကောင်းကျိုးပေးနိုင်လို့လဲ ? အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ မွတ်စ်လင်မ်တွေအပေါ် မုန်းတီးနေတယ်လို့ ဂျိဟာဒ်ဝါဒီများက လူတွေကို ပြောဆိုနေကြတယ်။ ဒီကြားထဲမှာမှ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က တီဗီပေါ်ကနေ မွတ်စ်လင်မ်အားလုံးကို ဖယ်ထုတ်ရေးဆိုပြီး အော်ဟစ်နေတယ်။ ဒါဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ စွပ်စွဲပြောဆိုနေချက်ကို အားဖြည့်ပေးနေတာပါပဲ။
ကျွန်မတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုများကိုလည်း သူက ထိပါးနေပါတယ်။ ဘာသာရေးညှင်းပန်းမှုကနေ အလွတ်ရုန်းထွက်လာခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံကို တည်ထောင်ထားခဲ့တာပါ။ ဒီနေရာမှာ အထူးသတိပေးချင်တာကတော့ လူထုဟာ မည်သည့်ယုံကြည်ချက် ဘာသာတရားကိုမဆို လွတ်လပ်စွာ ကျင့်သုံးခွင့်ရှိတယ်။ ဒါဟာ အမေရိကရဲ့ အမြတ်နိုးဆုံး စည်းမျဉ်းဥပဒေသများထဲက တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာထရမ့်ဟာ သမ္မတ ၀ါရှင်တန်ရဲ့ ၁၉၇၀ ခုနှစ်က ရို့ဒ်အိုင်လန်၊ နျူးပေါ့က ဂျူးလူ့အဖွဲ့အစည်းဆီ ရေးခဲ့တဲ့စာကို ပြန်ဖတ်သင့်နေပါပြီ။ အဲ့ဒီ ရို့ဒ်အိုင်လန်ပေးစာမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတည်းဟူသော နိုင်ငံသစ်ထဲမှာ သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကာကွယ်ပေးဖို့ သူတို့ကို အာမခံချက်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ “အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရက တစ်ဖက်သတ်မပြုမူခြင်းအပေါ် ဘက်လိုက်ပါမယ်၊ လက်တွဲကူညီမှုမရှိခြင်းအပေါ် ဖိနှိပ်ပါမယ်” လို့ ၀ါရှင်တန်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အသင်တို့ဟာ အသင်တို့ဘာပဲဖြစ်နေနေ ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ အတူရှိကြသူများပါပဲ လို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ အမေရိကန်မွတ်စ်လင်မ်အများအပြားက ဒီစကားကို ကြားလိုနေကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်မ အတိုင်းအတာတစ်ရပ်အထိ လောင်းကြေးထပ်ရဲပါတယ်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေက အသင်တို့ကို တရားဝင်ဖြစ်ဖို့ ခြိမ်းခြောက်တယ်၊ အသင်တို့ဘာသာဟာ အကြမ်းဖက်ဘာသာဖြစ်တယ် – အသင်တို့ဟာ အကြမ်းဖက်သူဖြစ်တယ် – အသင်တို့ဟာ ရန်သူဖြစ်တယ် ဆိုတာမျိုး သဘောထားနဲ့ အသင်တို့ကို ဆွပေးတယ်။ အမေရိကန် ၃ သန်းနီးပါးက မွတ်စ်လင်မ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ၊ အိမ်နီးချင်းတွေ၊ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေသူကြသူတွေပါ။ သူတို့တစ်တွေဟာ စစ်တပ်ထဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်။ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုတွေအဖြစ်နဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်နေကြတယ်။ ရဲဝန်ထမ်းများ၊ မီးသတ်သမားများ၊ ဆရာများ၊ လူထုခေါင်းဆောင်များအဖြစ်နဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အလုပ်အကျွေးပြုနေကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်မတို့လိုပါပဲ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်တွေ၊ ဂုဏ်ယူစရာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီစကားထက်ကိုပင် ထိုက်တန်ကြတဲ့သူတွေပါ။
ဒါကြောင့်မို့ ဒီကနေ့ ကျွန်မအနေနဲ့ တစ်မူထူးခြားသော စကားသ၀ဏ်တစ်ရပ် ပါးလိုက်ချင်ပါတယ်။
ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ အခြား ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီဝင်တွေဆီက အသင်တို့ ကြားသိရသမျှတွေဟာ အကြွင်းမဲ့ မှားယွင်းနေပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေဟာ အားလုံးဝိုင်းဝန်းတည်ထောင်ထားသောတိုင်းပြည်ဆိုတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့တန်ဖိုးများနဲ့ အလျဉ်း မကိုက်ညီပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံဟာလည်း အသင်တို့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့လည်း အမေရိကန်ပြည်သူတစ်ဦးဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အခြားသော အမေရိကန်နိုင်ငံသားများစွာကလည်း အလားတူပါပဲရှင်။
ကျွန်မတို့အားလုံး အထူးသဖြင့် ရီပတ်ဘလီကန်များအတွက် အန္တရာယ်မကင်းတဲ့ အမုန်းတရား စကားတွေ၊ လုပ်ရပ်တွေရှေ့မှာ မားမားမတ်မတ် ရပ်ပြီးရင်ဆိုင်ဖို့ အချိန်အခါကျရောက်လာပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က အော်စတင်မှာရှိတဲ့ တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်အနီး ကဖေးဆိုင်တစ်ခုမှာ ဦးခေါင်းရုံပုဝါဆောင်း မိန်းကလေးငယ်နှစ်ဦး နံနက်စာစားဖို့ ပြင်နေချိန် အခြားစားပွဲဝိုင်းက သူမတို့ကို လူမျိုးရေးစော်ကားချက်တွေနဲ့ အော်ဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ မကြားဝံ့မနာသာစကားတွေကြောင့် သူမတို့ဟာ မျက်ရည်ကျပြီး ထွက်ခွာခဲ့ကြရတယ်။ အဲ့ဒီ လူစည်ကားတဲ့ ကဖေးဆိုင်ထဲမှာ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှလည်း သူတို့အတွက် မကာကွယ်ပေးခဲ့ကြဘူးလေ။ သူတို့ ဆိုင်ပြင်ထွက်ခွာတဲ့အခါ မိန်းမငယ်လေးနှစ်ဦးအနက်တစ်ဦးက အခန်းထဲကလူတွေကို “ကျွန်မတို့ကို ဘယ်သူများ အရေးတယူပြုလိုပါသလဲ” လို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ “ဘယ်သူမှ မရှိဘူး” လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်က အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကလည်း “ကျွန်မတို့ ကျောခိုင်းပါပြီ။ ဒါဟာ အဖြစ်မှန်ပါပဲ” လို့ ဆိုခဲ့ရှာပါတယ်။
မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ အဖြစ်မှန် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ဟာ အမေရိကန်များအဖြစ် ကျွန်မတို့ရဲ့တန်ဖိုး များအပေါ် ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ အစစ်အမှန်ရပ်တည်ကြောင်း အမေရိကန်မွတ်စ်လင်မ်တွေ သိရှိအောင် အခိုင်အမာပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီနှစ်များရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်မတို့က ဘယ်လိုလူစားမျိုးတွေဆိုတာ – အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအားလုံးကို တန်းတူညီမျှသဘောထားသော ခိုင်မာညီညွတ်ပြီး ဂုဏ်ယူဖွယ်နိုင်ငံတစ်ခုဆိုတာ ကမ္ဘာကိုသိအောင် ပြသကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
← ‘ရေဘူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူး၊ ရေပါတာပဲ လိုချင်တယ် ဆိုတာကို လုံးဝ မလိုချင်ဘူး’ ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
အစိမ်းရောင်ဂုမ်ဘဒ်တော်ပေါ်ရှိ ပြတင်းပေါက်က ဘာလဲ? →
ရိုဟင်​ဂျာ သည်​ မြန်​မာနိုင်​ငံ၏ တိုင်းရင်းသား စစ်​ စစ်​၊ The Rohingyas are Indigenous Race of Burma
2018 ဖေဖေါ်ဝါရီကုန်က စပြီး၊ Passport Online Booking System
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဆွေးနွေးချက်၊ (နိုင်ငံသားကတ် ကိစ္စ ဆွေးနွေးချက်)
မြန်မာကို စစ်ရာဇဝတ်မှုခုံရုံးတင်နိုင်ရေး ကုလအဆင့်မြင့်အရာရှိ တောင်းဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သက်ကြီးရွယ်အို ဂျူးအစည်းရုံးမှပေးထားသော ဆုကို ရုတ်သိမ်း
Bangladesh minister says Rohingya repatriation unlikely to succeed
ကုလ လူ့အခွင့်အရေး နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာ မြန်မာကို ပြစ်တင်ဝေဖန်
ရခိုင်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဗြိတိန်လွှတ်တော်အမတ်များ၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံခြားရေးရာကောင်စီအစည်းအဝေး၌ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
In Geneva this week: Discussing human rights, accountability and justice
နဝေငျးကို ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ဘာကွောငျ့ ပါးရိုကျဆုံးမခဲ့တာလဲဆိုရငျ…..?
၁၉၆၂ မတ်လ ၂ရက်နေ့ည
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထံကဆု ပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ ဒန်းဒီး အမတ်ပြောကြား
ရိုဟင်ဂျာတွေ နောက်ထပ်ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှု့ မခံရအောင် တားဆီးသွားမယ်လို့ အမေရိကန်ဆို တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုလည်း ဖော်ထုတ်သွားမည်
ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ကိုယ်ရေးလက်ထောက် ရိုဟင်ဂျာများနှင့်တွေ့ဆုံရန် ကော့ဘဇားသို့ ရောက်ရှိ
ရခိုငျပဋိပက်ခ လူမြိုးရှငျးလငျးရေး မွောကျတယျလို့ ကနျ သံအမတျ ပွော
ကုလ လူ့အခွင့်အရေး လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒုက္ခသည်စခန်းကို သွားကြည့်မည်
မြန်မာပြည် ၀င်ခွင့်ဗီဇာ ငြင်းပယ်ခံရမှုအပေါ် ဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော် ကော်မတီစိတ်ပျက်
စစ်တွေ ဗုံးတိုက်ခိုက်မှု၊ ရခိုင်ပြည် အမျိုးသား ကောင်စီ ၏ ထိပ်သီး တစ်ဦးပါ ဒေသခံ ၄ ဦး ဖမ်းဆီး ခံရ
Evidence of Rohingya ethnic cleansing
We will appeal to countries to bring Burma to the ICC’
UN rights chief blasts veto use amid ‘human slaughterhouses’
Categories Select Category ကျန်းမာရေး (529) ခရစ်ယာန်ဘာသာ (10) စာပေအက္ခရာ (4) ထူးဆန်းထွေလာ (125) နည်းပညာ (91) ဖတ်စရာကဏ္ဍ (3) ဗဟုသုကဏ္ဍ (13) ဗုဒ္ဓဘာသာ (78) မျက်မှောက်ရေးရာ (4) မှတ်စု (1,354) သတင်းများ (11,838) သမိုင်း (421) သုတစာပေကဏ္ဍ (60) အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍ (58) သူ့အကြောင်း (355) အင်တာဗျူး(258) အစ္စလာမ်ဘာသာ (339) အထူးကဏ္ဍ (2,080) အိတ်ဖွင့်စာ (22) အထောက်ထားများ (160) အထွေထွေ (38) အခြားကဏ္ဍ (2) အခြားဘာသာ (6) ဥပဒေ (205) ဆောင်းပါးများ (4,518) ပေါ်လစီ (881) ရွေးကောက်ပွဲ (167) မြန်မာ – English (9) မြန်မာစကားပုံ (7) Burmese Version (1) Census (166) Contact (6) Dictionary (9) English Dictionary (3) Other Dictionary (1) Discovery (109) Election (3) English – မြန်မာ (8) English – Rohingya (3) English Version (1,518) Articles (739) Documents (94) History (258) Arakan History (191) Burmese History (57) M-M History (45) Scripts (5) World History (42) Interview (19) Laws (12) News (929) Breaking News (280) Local News (291) Open Letter (11) Other News (10) World News (521) Religious (36) Islamic (35) Other Religious (2) English-Myanmar, Pali-Myanmar (1) General (217) Introduction (5) Link (248) Movie (72) Other Dictionary (6) Photos (752) Popular Post (5) Rohingya – English (10) Special (5) Videos (340) Website (43)
Archives ယခင် ပိုစ်များဖတ်ရန် Select Month March 2018 (46) February 2018 (100) January 2018 (85) December 2017 (116) November 2017 (118) October 2017 (98) September 2017 (118) August 2017 (117) July 2017 (80) June 2017 (14) May 2017 (8) April 2017 (16) March 2017 (11) February 2017 (11) January 2017 (20) December 2016 (50) November 2016 (23) October 2016 (23) September 2016 (15) August 2016 (33) July 2016 (40) June 2016 (41) May 2016 (52) April 2016 (113) March 2016 (96) February 2016 (99) January 2016 (178) December 2015 (140) November 2015 (201) October 2015 (88) September 2015 (93) August 2015 (140) July 2015 (91) June 2015 (93) May 2015 (143) April 2015 (150) March 2015 (150) February 2015 (105) January 2015 (155) December 2014 (289) November 2014 (175) October 2014 (195) September 2014 (166) August 2014 (189) July 2014 (266) June 2014 (184) May 2014 (314) April 2014 (256) March 2014 (242) February 2014 (218) January 2014 (340) December 2013 (258) November 2013 (231) October 2013 (232) September 2013 (234) August 2013 (387) July 2013 (359) June 2013 (533) May 2013 (672) April 2013 (701) March 2013 (717) February 2013 (626) January 2013 (861) December 2012 (712) November 2012 (665) October 2012 (719) September 2012 (449) August 2012 (553) July 2012 (434) June 2012 (541) May 2012 (423) April 2012 (360) March 2012 (87) February 2012 (89) January 2012 (26) December 2011 (83) November 2011 (37) October 2011 (1)